Google dia mitaky ny fiverenan'ny mpiasa rehetra any amin'ny birao hatao vaksiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Google dia mitaky ny fiverenan'ny mpiasa rehetra any amin'ny birao hatao vaksiny
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Google no orinasa tsy miankina lehibe indrindra hatreto izay manao ny fanaovana vaksiny COVID-19 ho an'ny mpiasa ao aminy.
Izay tonga miasa any amin'ny tobin'ny Google dia mila vaksiny.
Horosoana any Etazonia io politika io amin'ny herinandro ho avy, ary manerantany aorian'izany.
Nilaza ny filoha Joe Biden fa ny fepetra vakisiny ho an'ny mpiasa federaly amerikana dia "dinihina izao."
American company multinational technology Google LLNanambara i C fa ny mpiasa rehetra miverina miasa ao amin'ireo tobiny dia tsy maintsy ampidirina vaksinin'ny COVID-19.
Tamin'ny nanombohan'ny valan'aretina COVID-19, dia nandefa ny ankamaroan'ny mpiasa efa ho 140,000 tany an-trano ny volana martsa lasa teo i Google mba hiasa lavitra. Saingy izao, misokatra indray ny tobin'i Google, ary hiverina hiasa any amin'ny birao ny mpiasa, saingy rehefa vita ny fanaovana vaksiny dia nilaza tamin'ny CEO Google Sundar Pichai tamin'ny mailaka androany.
"Izay tonga miasa any amin'ny tobin'ny tobintsika dia mila vaksiny," hoy i Pichai nanoratra, ary nilaza fa hofongorana any Etazonia io politika io amin'ny herinandro ho avy, ary manerantany aorian'izany.
Ireo mpiasa izay tsy maniry ny hiverina hiasa manokana dia afaka miasa an-trano hatramin'ny volana oktobra, hoy hatrany izy, ary ny orinasa dia hamela mpiasa sasany hiasa voalohany indrindra ao an-trano amin'ny faran'ny taona.
Google no orinasa tsy miankina lehibe indrindra hatreto izay tsy maintsy atao ny fanaovana inokulasi ho an'ny mpiasa ao aminy, saingy mety hanaraka izany ny governemanta amerikana iray manontolo.
Ny fanapahan-kevitr'i Google dia tonga rehefa ny filoham-pirenena amerikana Joe Biden no nieritreritra ny hitifitra an'ireo mpiasa federaly rehetra.
Nilaza tamin'ny mpanao gazety tamin'ny talata teo i Biden fa ny fepetra takiana amin'ny vaksinina ho an'ny mpiasa federaly dia "dinihina izao", ary ny tatitra nataon'ny haino aman-jery dia milaza fa ny fanambarana ny momba io lohahevitra io dia mety ho tonga hatramin'ny alakamisy izao.
Samy manana ny fahefana hangataka amin'ny mpiasan'ny asany i Biden sy i Google. Ny fanadihadian'ny Departemantan'ny Fitsarana dia namarana tamin'ity herinandro ity fa ny orinasam-panjakana na ny orinasam-panjakana dia afaka mandidy ny mpiasa hatao vaksiny.
Na izany aza, Google dia manana birao any amin'ny firenena 50 manerantany, ary ny fanamby ara-dalàna manohitra ny vaksinin'ny vaksinina dia mety hapetraka any amin'ny sasany amin'ireo toerana ireo. Ny mailakan'i Pichai dia nanamarika fa ny mandat dia “hiova arakaraka ny fepetra sy ny lalàna eo an-toerana,” na dia tsy nisy antsipiriany fanampiny nomena aza.
Fotoana fohy taorian'ny fanambarana nataon'i Pichai, Netflix nanambara fa hitaky vaksiny ireo mpisehatra miasa amin'ny famokarany any Etazonia, sy ireo mpiasa mifandray akaiky amin'izy ireo.